Oghere na-ekpochapụ maka ogwe aka nke e ji aka mee, nke na-eru - Akụrụngwa - 2020
Oghere distillation nke moonshine
Ndị na-emepụta moonshine nke ụlọ mere mgbalị iji hụ na ihe ọṅụṅụ ha dị ọcha site na mmanụ na-emerụ ahụ ma na-enweghị ísì ụtọ. Iji mee nke a, ha na-agbanye ngwaahịa ahụ ọtụtụ ugboro, n'ihi nke a na-esi kpochapụ ya. Ma ụzọ kachasị mma ịmepụta mmanya na mmanya na-aba n'anya na-aba n'anya bụ iji ngwaọrụ nwere kọlụm distillation. A ga-atụle ụkpụrụ nke ọrụ ya na ohere ịmepụta onwe onye n'isiokwu ahụ.
Nhazi nke ụlọ ọrụ mmanya na-aba n'anya
Na ngwa nju oyi
Uru na ọghọm nke usoro nhazigharị
Nkọwa na ụkpụrụ nke ọrụ
Ka moonshine ka no, okpukpu ogugu a na-eme ka ohia, nani nke kachasi elu, di ocha. Mana nke kachasị, ọ bụ maka ịmepụta mmanya dị ọcha 96%, nke a na-eji dịka ihe ndabere na nkwadebe nke ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya dị iche iche. Ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya bụ ihe ndị na-emepụta ihe, bụ nke nkewa na-ewepụta mmanya na-aba n'anya (ihe ọṅụṅụ, mmanya na-aba n'anya) n'ime mpekere dị iche iche (methyl na ethyl alcohols, mmanụ mwakpo, aldehydes).
Ọzọ, anyị na-enyocha ụkpụrụ nke ọrụ nke kọlụm ahụ.
A na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ jupụtara na mmiri na-aba n'anya. A na-esi n'usoro steam na-emepụta nke ọma, nke na-arịgo elu na kọlụm ahụ. N'ebe ahụ, ọ na-echere condenser reflux, bụ ebe a na-eme ka ụgbọ mmiri ahụ dị jụụ ma nwee mgbakọ.
Ị ma? Ogidi ndị kachasị na-ekpuchi ihe ruru 90 mita n'ogologo ma nwee mita iri na isii nke 16..
Mkpụrụ nke condensate (phlegm) gbadata na kọlụm jupụtara na steam. Flux dị mma na-agbada obere nchara, bụ nke a na-ahụ na steam na-ekpo ọkụ. N'etiti ha enwere okpukpo ọkụ na mbufe nke uka, nke a na-eme ugboro ugboro ma ọ bụ ihe dị mkpa nke imezi.
N'ihi ya, a na-achịkọta mmanya na-abaghị uru na "isi" nke kọlụm ahụ. Maka ụbụrụ ikpeazụ, a na-ahapụ ya n'ime friji ahụ, bụ nke mgbatị ahụ, ya bụ, ngwaahịa a rụchara.
Vidio: kọlụm distillation na ụkpụrụ nke ọrụ ya
Ngwaọrụ nke kọmpụ mmezi nwere akụkụ dịgasị iche iche, a ghaghị ịgụta akụkụ ya nke ọma. Maka imepụta a dị mkpa:
ihe mkpofu, ma ọ bụ akpa nwere mmiri mmiri na-aba n'anya;
tsarga, ma ọ bụ ọkpọkọ, nke ga-abụ ahụ nke kọlụm;
a na-eme ka mmiri na-eme ka mmiri ozuzo na-eme ka mmiri dị jụụ ma na-eme mkpọtụ;
nwughari na i choro ijuputa rye;
onye nlekota mmiri;
obere akụkụ maka njikọta akụkụ nke usoro ahụ na maka nlekota oru ya (thermometers, automation).
Tụlee akụkụ nke ọ bụla nke ngwaọrụ ahụ iche iche.
Ndabere nke usoro ahụ dum ka dị. Nke a bụ akpa maka mmanya-nwere ihe ọkụkụ.
O nwere ike ijere ihe ọ bụla e ji ọla kọpa mee, nke nwere ike ma ọ bụ igwe anaghị edozi. Ụfọdụ ndị na-agba ọsọ onwe ha na-eji ígwè na-esi nri maka nke a ma ọ bụrụ na a na-atụ anya obere mkpụrụ mmanya.
Ị nwere ike ịmepụta ihe kwesịrị ekwesị site na "akwa igwe".
Video: otu esi eme-ya-onwe gị Ihe ndị a chọrọ bụ na ọkwa ga-ezute:
zuru tightness: n'oge a na-esi nri, arịa ahụ ekwesịghị ikwe ka ụgbọ mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri gafere, a gaghị ewepụkwa mkpuchi ahụ site na nrụgide na-arịwanye elu;
a na-esi na steam ga-apụta ma ọ bụrụ na ị na-atụnye ihe kwesịrị ekwesị n'ime okpu.
Ọ bụrụ na ịzụta ihe a kwadebere, ọ ga-emezurịrị nchịkọta ndị a. Ọ dị ezigbo mkpa ka olu nke oghere ahụ tụnyere ọnụ ọgụgụ nke kọlụm ahụ. Maka ọkpọkọ nke dị elu nke 1.5 m na 50 mm na dayameta, ị ga-ewere ike nke 40-80 lita, maka 40 mm nke tsarg a 30-50 liter arịa dabara, maka 32 mm ị chọrọ ọ dịkarịa ala 20-30 l, na maka dayameta nke 28 mm ị chọrọ ihe magburu onwe ya onye na-esi nri.
Ọ dị mkpa! A ghaghị ijupụta ebe a na-emepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụghị karịa 2/3 nke olu ya, ma ọ bụghị na kọlụm ahụ ga - "".
A na-akpọ okpo nke a na-akpọ nhazigharị ala ahụ. Nke a bụ otu cylinder nwere mgbidi mgbidi nke 1.5 mm na dayameta nke 30-50 mm. Ihe nkedo nke eriri ahụ na-adabere n'ịdị elu: nke dị elu nke ọkpọ ahụ, na-eji nwayọọ nwayọọ na-ewepụ ihe ndị na-emerụ ahụ na-emerụ ahụ ma na-ehichapụ mmanya ahụ.
Ihe kachasị elu nke tsarga bụ 1-1.5 m. Ọ bụrụ na ọ dị mkpụmkpụ, mgbe ahụ, ọ gaghị enwe ohere maka mmanụ dị iche iche dị na ya, ha ga-anọkwa na ya. Ọ bụrụ na ọkpọ ahụ dị ogologo, mgbe ahụ, oge nhazi ahụ ga-abawanye, nke a agaghị emetụta arụmọrụ ahụ. Akwụkwọ mpịakọta nke Tsarga na nkwụnye maka ire ere bụ ebe a kwadebere maka mbadamba ụrọ site na 15 cm n'ogologo Ị nwere ike ịzụta akpa mmiri 2-3 ma jikọọ ha n'otu. Ị nwere ike ime ka gị onwe gị nwee ike ịchọrọ ya. Iji mee nke a, ị ga-achọ ka a na-anụ ụzụ.
Video: esi eme ka rye maka oghere distillation na onwe ya Ogologo elu na ala dị mkpa iji belata eri ahụ iji gbakwunye ala gaa na kọlụm ahụ, tinyekwa reflux n'elu.
Site na ala, ịkwesịrị ịgbakwunye okporochị iji jide ihe nkedo nke mgbọm ga-ejupụta. Ụfọdụ ndị ọkachamara n'ụlọ ebe a na-etinye ọkpọkọ ahụ na mkpuchi, dịka ọmụmaatụ, ụfụfụ ụfụfụ.
Ị ma? Ejiri ederede Panchenkov na USSR na 1981 ọ bụghị maka imepụta mmanya, kama iji mee ka mmanụ dị ọcha maka mmanụ ụgbọala..
Ideju tsarga nozzles bụ ihe dị mkpa iji dozie. Ọ bụrụ na ọkpọkọ ahụ nwere oghere, ọ bụ naanị usoro nhazi ka ọ ga-ekwe omume na ya, nke ga-eme ka mịkwaa, ma ọ bụghị mmanya na-aba n'anya. Ebumnuche nke onye na-arụ ọrụ ahụ bụ ime ka elu ahụ nke reflux gafere.
Ya mere, a na-ebute ihe ndị dị egwu na-adịghị ike ma ghara ịbanye n'ime ngwaahịa ikpeazụ ahụ, a na-ewepụkwa ụgbụ ọkụ nke mmanya dị ọcha. Ntuchi ahụ kwesịrị imejupụta tube ahụ kpamkpam.
Ihe nhicha ahụ nwere ike ibu ihe ọ bụla na-esi na ya apụta:
iko iko ma ọ bụ seramiiki;
akpụkpọ anụ na-acha nchara anụcha, nke a na-egbuchasịsị (site n'oge ruo n'oge ọ dị ha mkpa ka a gbanwee, ka ihe ahụ na-abawanye);
Panchenkov nozzle (nhọrọ kachasị mma), nke a na-esi na ọla kọpa ma ọ bụ igwe nchara. Uru ya: kpofuo phlegm ma ghara ida oge.
Panchenkov si nozzle
Ọ dị mkpa! Okwunwu akwukwo a ga-esi na igwe. Ị nwere ike ịlele ya na magnet: ọ na-adọta igwe anaghị agba nchara.
Ogwe nhọrọ ahụ bụ obere mpempe ọkpọ n'etiti akụkụ dorsal na dephlegmator. Nzube ya bu ichikota phlegm: 'buru isi' mbu, ya bu, ihe ogugu mmanya na-aba n'anya, mgbe ahu na-aga "aru", ma obu mmanya n'abughi uto na odighi nma. Nhọrọ nke saịtị a na-eme n'ụzọ dịgasị iche iche, mana n'otu ụkpụrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ:
gaa na mpempe n'elu, akara nke ya dabara na dayameta nke tsarg, si n'ime, weld tube nke obere dayameta nke mere na n'etiti ha na gburugburu ebe a na-etinye n'akpa, ebe a ga-anakọta akụkụ nke phlegm;
kama nke tube, a na-ekpuchi efere anụ ahụ, nke kwekọrọ na ntaneti nke ọkpọkọ ahụ, nwere oghere gburugburu n'ime: a ga-anakọta akụkụ nke reflux na efere ahụ, ụfọdụ ga-adaba n'ime oghere ahụ n'ime ụlọ.
Video: eme-ya-onwe gị nhọrọ saịtị A na-etinye oghere abụọ maka ịlụ abụọ na ọkpọka n'èzí: a na-etinye mgbata na otu iji kpoo reflux ma tinye ihe ọkụkụ n'ime nke ọzọ (obere) iji tụọ okpomọkụ nke steam ahụ.
Elu nke ihe a bụ dephlegmator. N'ebe a, a na-eme ka ụgbọ mmiri ahụ dị mma, na-eme ka ọ dị ma na-agbadata n'ụdị irighiri mmiri. N'aka aka gị, i nwere ike ime ọtụtụ nhọrọ maka dephlegmators:
Akpado ma ọ bụ ogologo mmiri reflegmator A na-eji ụbọ abụọ eme ihe dị iche iche. Mmiri na-asọ asọ na-agafe n'etiti ha, na n'ime obere ọkpụkpụ ụgbọ mmiri ahụ na-abanye condensate. Mpepu dị n'elu nwere ike dochie ọnọdụ thermos, nke a na-agbanye olu ya na nchịkọta nhọrọ. Na ala nke thermos ọ dị mkpa iji mee ka oghere maka TCA, ya bụ, ikuku njikọ nke ikuku, site na nke ìhè nke abụọ na-enweghị isi ga-apụ.
Vidio: usoro nke ọfụma na-arụ ọrụ kpọmkwem
Dephlegmator Dimrota na-arụ ọrụ nke ọma karia ihe nlereanya gara aga. Ahụ bụ ọkpọkọ nke otu dayameta dị ka eriri. N'ime ya bụ tube dị mkpa, nke na-agba gburugburu, nke mmiri oyi na-agagharị. Ọ bụrụ na dayameta nke olu akwa ahụ bụ 50 mm, mgbe ahụ, a ga-agbagọ gburugburu ahụ site na tube nke nwere mita 6 mm ma ogologo nke mita 3. Mgbe ahụ, ogologo nke dephlegmator ga-abụ 25-35 cm.
Video: mgbakọ nke kọlụm distillation na Dimroth reflux condenser
Shell-na-Pipe Dephlegmator mejupụtara ọtụtụ ọkpọkọ: obere pipụ na-agbanye n'ime nnukwu, ebe mmiri ntanetị na-eme. Ihe nlereanya a nwere ọtụtụ uru: mmiri na-ere ọkụ ma jiri ụgbọ mmiri na-agba ume ngwa ngwa. Tụkwasị na nke a, a pụrụ itinye atụmatụ a na kọlụm n'otu akụkụ, nke na-ebelata ịdị elu ya.
Video: ụkpụrụ omume nke shell-and-tube dephlegmator
Eji obere refrjiraeto, ma ọ bụ ihe na-edozi ahụ, iji belata okpomọkụ nke ethylene na-esi na mwepụ. A na-eme ya na ụkpụrụ dephlegmator, ma site na akpa nke obere dayameta.
Mụta otu esi eme maka mịmịlị apụl.
O nwekwara ihe abụọ na-agafe mmiri: ọ na-abanye na mmiri mmiri dị ala, ọ na-esi n'ugwu ahụ pụta, a na-ezipụkwa mkpụrụ osisi silicone ahụ ruo dephlegmator maka otu nzube ahụ.
Mmiri na-agba ọsọ ọsọ site na mgbata.
Vidio: esi mee ka a rụnye ya refrjiraeto do-it-onwe gị maka kọlụm distillation
Ogwe pasteurization abụghị ihe achọrọ nke kọlụm ahụ. N'aka nke aka, ọ na-eme ka atụmatụ ahụ dị mkpa. Ma, n'aka nke ọzọ, ọ na-eme ka ọ dịkwuo mma, ka ọ na-edozi mmanya na-aba n'anya site na mkpịsị isi n'oge mmezi niile.
Ọ bụ obere obi (30 cm) na ntinye nhọrọ ọzọ. Ọ na-agbakwunye isi rye. "Ndị isi", dị ka ọ dị na mbụ, si na dephlegmator pụta, ma ọ bụghị naanị ná mmalite, ma mgbe niile.
A na - anakọta ihe ọṅụṅụ na - aba n'anya site n 'nhọrọ dị ala nke obere tsarga. Nke a na-eme ka mmanya dị oke ọcha.
Usoro nhazi oge dị ogologo ga-adịgide ruo ọtụtụ awa. N'otu oge ahụ, ọ ghaghị ịdị na-nyochaa mgbe niile ka "isi" na "ọdụ" ghara iji aka ahụ "mix" ahụ. Ọ gaghị adị nhịahụ ma ọ bụrụ na ị wụnye ezigbo ngwaike iji chịkwaa nhazigharị ahụ. Maka nzube a ka a na-ezubere BUR (nhazi nhazi njikwa). Nchịkọta nwere ike ime ihe ndị a:
gbanye mmiri iji mee ka ahụ dị jụụ;
belata ike n'oge nhọrọ nke phlegm;
kwụsị nhọrọ na njedebe nke usoro ahụ;
gbanyụọ mmiri na okpomọkụ mgbe njedebe ọdụ.
Ị nwere ike ịmepụta usoro ahụ site na ịmepụta "mmalite-nkwụsị" na valvụ: mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-ebili, ọ na-akwụsị nlele, mgbe ọ na-eguzobe, ọ maliteghachiri nlele.
Ị nwere ike ime n'enweghị akpaaka, ma ọ dị mfe karịa ya.
Video: Akụrụaka maka kọlụm distillation
ihe a rụchara bụ mmanya dị ọcha 96% n'enweghị ihe na-emerụ emerụ;
na ọnọdụ distillation, ị nwere ike ime ka ndị na-agagharị agagharị na ndị na-achọ ka a na-achọgharị ya;
mmanya mmanya na-aba n'anya nwere ike ịmalite ịṅụ mmanya ọ bụla;
Ị nwere ike ịmepụta ngwaọrụ maka onwe gị.
ethylene enweghi ihe omumu nke organoleptic;
usoro mmezi a dị ogologo: ọ bụghị ihe karịrị 1 liter nke distillate nwere ike nweta na otu awa;
ejikere ejikere dị oke ọnụ.
A na-ezube mmezi iji mee ka mmanya dị ọcha dị iche iche. Nkọwa nke mejupụtara kọlụm ekwesịghị imetụta àgwà ma ọ bụ uto ngwaahịa a. Ya mere, ihe a ga-abụ nke na-adịghị mma, nke na-adịghị mma ma ọ dịghị emetụta uto na isi ísì.
Nri kacha mma nri, ya bụ, chromium-nickel stainless steel. Ọ na-anọpụ iche na-adịghị mma ma ọ dịghị emetụta ngwongwo nke ngwaahịa ahụ.
Akụrụgwụ bụ ihe ọṅụṅụ na-aṅụ site na ịṅụ mmanya, vodka ma ọ bụ moonshine dị iche iche na mkpụrụ osisi dị iche iche, osisi, ngwa nri, esi ísì na ọgwụgwọ. Anyị na-akwado ịmụta ntụziaka maka ime tinctures site na: blackfruit, cherry, cranberry, black currant, plum, pine nuts, lilacs, apụl na bison.
A pụrụ ịkpọ kọlụm distillation ọgbọ ọgbọ ọhụrụ, n'ihi na ọ na-arụpụta mmanya dị mma. Iji aka nke aka gị rụọ ọrụ a bụ nnọọ ihe siri ike. Ma ọ bụrụ na ị gbalịsie ike, table ahụ na-eri nri ga-abụ onye isi na-aṅụ mmanya na-aba n'anya.
Nlekere pink pearl na-atọ ụtọ ma mara mma agaghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị. Nkọwa nke ụdị tomato na foto
Oku maka ahihia na ngwakọta
Anyị na-eme ya onwe gị: Greenhouse maka seedlings na aka aka ha